HFE fitaovana fanadiovana elektrônika tsara ho an'ny loko mihetsika China Manufacturer
Description:Fanamiana ho an'ny maso,HFE tsara fiarovan-tena elektrika,Fitaovana elektrôman-tsarimihetsika tsara elektrika
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Famenoana ny vahaolana amin&#39;ny alàlan&#39;ny sary mihetsika > HFE fitaovana fanadiovana elektrônika tsara ho an&#39;ny loko mihetsika
Ity Solon-tsakafo ity ho an'ny efijery manaitra dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny fanamafisana ny mpanjifa, mora voatahiry sy nentina .
1.HFE Manadio ny rivotra mahery vaika mahery sy ny rivotra mahery, Afaka miparitaka tsara izy mivoaka sy miparitaka amin'ny rihana sy ny fonosana isan-karazany, ary misy fiantraikany tsara amin'ny famonoana, fanasiana, famafazana sy fanadiovana;
Fampiasana lamba simika
Ity vokatra ity dia fitambaran'ny Hydrofluoroether. Professional Cleaning Solutions dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko ary tsy misy poizina no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Fanamiana ho an'ny maso HFE tsara fiarovan-tena elektrika Fitaovana elektrôman-tsarimihetsika tsara elektrika